Raw Mesterolone (Pro ayika) ntụ ntụ na-emepụta ihe na - eweta ya - Factory
Raw Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ (1424-00-6)
Ọzọkwa, a maara dị ka Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ bụ steroid androgen steroid na-adọrọ adọrọ nke a na-eji ọnụ ekwu. O buru ụzọ pụta maka iji ọgwụ na 1934 dịka ọgwụ arụmọrụ na-egbochi na-egbochi ịda mbà n'obi. Ma ndị bodybuilders na ndị nwere testosterone dị ala achọpụtala na ọ ga-aba uru na ngalaba na-ahụ maka mmekọahụ. Ewu na-adị na-esiwanye ike n'etiti ndị steroid na-eji ndị na-ebi ndụ na ndị na-eme egwuregwu iji kwalite ndụ ndụ ike.
Ụdị uzuzu Mesterolone (Proviron) (1424-00-6) video
Raw Mesterolone (Proviron) ntụ (1424-00-6) Nkọwa
Raw Mesterolone (Proviron) ntụ, nke e rere n'okpuru aha aha Proviron n'etiti ndị ọzọ, bụ ọgwụ na-eme steroid (Androgen na anabolic steroid) (AAS) nke a na-eji mee ihe karịsịa na ịgwọ ọkwa nke testosterone dị ala. E jikwa ya mee ihe maka ịzụ ụmụ nwoke, ọ bụ ezie na ojiji a bụ arụmụka. Ọ na-ewere ọnụ.
A na-eji Raw Proviron ntụ ntụ mee ihe maka ịgwọ orrogen na-adịghị na nwoke hypogonadism, anaemia, na ịkwado ọmụmụ nwoke n'etiti ihe ndị ọzọ. A na-ejikwa ya mee ihe banyere ụmụ nwoke na-egbu oge. Ebe ọ bụ na enweghi mmetụta estrogenic, a pụrụ igosi ntụpọ nke Raw Mesterolone (Proviron) maka ịgwọ usoro nke etrogen deficiency nke obi nro ma ọ bụ gynecomastia dịkwa. A kọwara ọgwụ ahụ dị ka onye na-adịghị ike na-arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ na-adịghị ahụkebe ma na-adịghị eji ya mee ihe maka ọgwụgwọ mmechi nke androgen, ma a ka na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe.
Raw Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ (1424-00-6) Smmezi
Product Name Razu Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ
Chemical Aha Proviron, ndị ọzọ
Brand Name Ọ dịghị ụbọchị
Klaasị ọgwụ ọjọọ Androgen; Anabolic steroid
molekụla Fnhazi C20H32O2
molekụla arọ 304.474 g / mol
SMILES O = C4C [[Email na-echebe]3CC [[Email na-echebe]2 [[Email na-echebe]] (CC [[Email na-echebe]] 1 (C) [[Email na-echebe]H] (O) CC [[Email na-echebe]12) [[Email na-echebe]3 (C) [[Email na-echebe]H) (C) C4
Nkịtị Monoisotopic 304.24 g / mol
Ọkara Ndụ nke Ndụ Ọ dịghị ụbọchị
Nkọwa Ahụ Solid
Antinye Proviron bụ ahia / aha aha maka etrogen ahụ dịka Raw Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ. Ọ bụ ihe a na-eji ọnụ ekwu okwu, ma a dịghị ele ya anya dị ka steroid.
Gịnị bụ Nzuzu Mesterolone (Proviron) ntụ (1424-00-6)?
Proviron, aha njirimara maka mesterolone, bụ ụdị ihe nkiri nke nwoke na nwanyị. Mesterolone, nke a maara dịka 1-methyl-5? -Dihydrotestosterone (DHT), bụ methylated (mgbakwunye nke otu methyl group -CH3) na-eme ka ọ bụrụ steroid dịka nke DHT nkịtị nke na-adịghị atọba n'ime estrogen ma ọ bụ progesterone (ma nwanyi hormones) ozugbo n'ime ahụ. Enwere ntụpọ nwere ọtụtụ mmetụta dị mma n'ahụ ahụ, gụnyere ịmalite ịmalite nkwonkwo ahụ, na-eme ka ogo testosterone na-emeso ịkwa iko nwoke.
Kedu ka ntụ ntụ Mesterolone (Proviron) si dị arọ (1424-00-6) ọrụ
Ihe kachasị Proviron ntụ na-eji na-agwọ ọrịa ụwa bụ ịgwọ ọrịa na-eme ka androgenic nke kachasị emetụta agadi. A na-ejikwa ọgwụ ahụ eme ihe dị ka enyemaka ọmụmụ na ndị na-ebute akwụkwọ maka ụmụ nwoke, nke na-eme ka Prochina powder dị ezigbo steroid nke na-enye mmetụta dị mma n'ahụ mmadụ. Ndị na-eme egwuregwu na ndị ọzọ na-eme egwuregwu na-ejikwa ikike ọgwụ ahụ eme ihe iji nyere ha aka inweta ahụ ike ma mee ka ụbụrụ hormone testosterone dịkwuo elu.
Proviron ntụ bụ dihydrotestosterone ewepụtara anabolic steroid, ọ na-structurally gbanwere DTH hormone na mgbakwunye na nke methyl otu na carbon na otu ọnọdụ. Nke a na - enyere hormone aka ịlanarị ingestion oral n'ihi na a na - echebe ya site na nkwụsị nke ịpụ na ya.
Razu Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ (1424-00-6) Ụdị
N'ọnọdụ ahụike maka ọgwụgwọ nke na-ezughị ezu na androgenicity, a na-eji otu nchịkọta nke 25mg ugboro atọ kwa ụbọchị (maka ngụkọta nke 75mg kwa ụbọchị) na mmalite nke ọgwụgwọ, wee belata ụbụrụ mgbe e mesịrị na nhazi ọkwa otu mbadamba 25mg naanị otu ụbọchị. N'iji ọgwụgwọ nwoke na-amaghị nwoke, a na-ejikarị usoro ọgwụgwọ ndị ahụ eme ihe, ọ bụ ezie na ọgwụ ndị ọzọ na-eme ka ịzụlite na-esonye na Proviron.
N'ihe banyere ndị na-emepụta ahụ na ndị na-eme egwuregwu, a na-eji Proviron eme ihe n'etiti 50 - 150mg kwa ụbọchị ka ha nwee ike ịchịkwa ogo Estrogen, belata njigide mmiri (nke estrogen), ma ọ bụ iji mee ka ọmụmụ na-esote ngwụsị nke oge.
Ọ bụ ezie na akwadoghị Proviron maka iji nwanyị mee ihe, ụfọdụ ụmụ nwanyị na-eme egwuregwu na ndị na-ewu ewu na-ahọrọ iji ya. N'ọnọdụ a, otu usoro ihe ojoo nke 25mg kwa ụbọchị bụ iji gbanwee ọdịdị nke ahụ. A ghaghị ime nke a karịa 4 - 5 izu iji zere mmetụta ntanetị.
Raw Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ (1424-00-6) uru
Erectile Dysfunction Ọgwụgwọ
Dị ka ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa anabolic, njedebe mmekọahụ nwere ike ịbụ okwu nke na-ekwu okwu nke yiri ka ọ ga-apụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-atụghị ya anya. Mgbanwe ngwa ngwa nke hormones ahụmahụ nke ahụ gị mgbe ị na-ahụ steroid nwere ike ịhapụ gị ka ọ na-atụ egwu mgbe ọ kachasị mkpa n'ime ime ụlọ.
Bụrụ Onye Na-atụsi Anya Ike
N'akụkụ ụba testosterone, a na-eme ka ọmụmụ nwoke dịkwuo mma na Proviron. Ma ka o doo anya, ntụpọ ihe na-eme ka ọ ghara iweli elu ume. Ebe ọ bụ na mmanụ na spam bụ ihe abụọ dị iche iche, ọ nwere ike ịdị mfe ịmegharị ha. Ihe omuma bu ihe mere umu nwanyi ji eme nri. N'aka nke ọzọ, spam bụ ụgbọala nke na-enye ohere ka mmiri na-egwu mmiri na njedebe ha.
N'ebe dị mma, Enwere ntụpọ nwere ike inye aka mee ka nwoke nwee ihe ịga nke ọma ma malite ezinụlọ ya na ọchịchọ ya. Ụbọchị nke ichere iji nụ ma ma ọ bụ na ọ bụghị ime nwa nwara dị mma ma ọ bụ na ọ gaghị echere oge ọ bụla. Ịmepụta mkpụrụ na-emepụta nri nwere ike ịdị mfe dị ka ịgbakwunye usoro zuru ezu nke Proviron na starch steroid gị.
Dịka ọ na-ejikarị ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa anabolic, Proviron powder na-anapụtakwa mmụba dị mma na testosterone.
Kpochapu Ụmụ nwoke
Dị ka ọtụtụ ọgwụ steroid na-emekarị, imeju ara nwere ike ịbụ nnukwu nchegbu maka bodybuilders. Obi di uto na enweghi ihe ozo. Naanị ike siri ike, nke na-eme ka ahụ nwee ike ịhụ kama ịba ụba na abụba nke oke oke.
Zụrụ Mesterolone (Proviron) ntụ ntụ si Buyaas.com
Ihe niile ị ga-ama gbasara Proviron maka bodybuilding
De Souza, GL, & Hallak, J. (2011). Anabolic steroid na nwoke infertility: nyocha zuru ezu. BJU mba, 108(11), 1860-1865.
Angell, PJ, Green, DJ, Lord, R., Gaze, D., Whyte, G., & George, KP (2018). Nnukwu mmeghachi omume nke obi na-eme ka mmega ahụ na-eme ka ndị ọrụ steroid bụrụ ọnụọgụ: Nchọpụta mbụ. Sayensị na Egwuregwu, 33(6), 339-346.
Raa Testosterone Enanthate ntụ ntụ (315-37-7)
Rao Testosterone Acetate ntụ ntụ (1045-69-8)
Rao Testosterone Nkọcha ntụcha (5721-91-5)
Rao Testosterone Cypionate ntụ ntụ (58-20-8)